Anụmanụ Carboniferous: njirimara na evolushọn | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime oge Paleozoic enwere oge 6 dị iche iche. Otu n'ime ha bụ oge carboniferous. N'oge a, achọtala ọtụtụ ọnụọgụ carbon na ndekọ ndekọ fosil, n'ihi ya aha ya. Ihe a niile bụ n'ihi oke ọhịa nke e liri na nke sitere na eriri carbon. O bu otu n’ime ihe kpatara ya Anụmanụ Carboniferous ọ dị ezigbo mkpa n’ụwa niile.
Ya mere, n'isiokwu a anyị ga-enyocha mkpa nke ụmụ anụmanụ Carboniferous na njirimara ya bụ isi.
1 Oge Carboniferous
2 Ifuru na ahịhịa
3 Anụmanụ Carboniferous
3.3 Nnukwu dragonflies
4 Anụmanụ Carboniferous: amphibians
Oge a bụ otu n'ime oge ndị nwere otu mgbanwe dị oke mkpa n'ọkwa ụmụ anụmanụ na osisi. Otu ihe kpatara ya bụ nke na-egosi na ndị amphibians hapụrụ mmiri iji merie usoro ihe ndị dị n'ụwa. Nke a bụ n'ihi na mmepe nke akwa amniote. Oge Carboniferous dị ihe dị ka nde afọ 60. Ọ malitere ihe dịka afọ 359 gara aga wee kwụsị ihe dịka nde 299 afọ gara aga.
N’oge a, oke ihe omumu banyere ala. N'ime ya efere tectonic nwere mmegharị nke oke ikuku mmiri dị ike. Ntughari a mere ka otutu ala buru uzo megharia ma malite ugwu.
Otu n'ime ihe ngosipụta nke oge Carboniferous bụ ọdịdị nke akwa amniotic na anụ ndị mbụ na-akpụ akpụ. A na-eche na anụ na-akpụ akpụ sitere na amphibians dị ugbu a. N'ihi ntopute nke akwa amniota, akwa nke echedoro ma kewapụ ya na gburugburu ebe obibi, nyere aka na nchekwa ụmụaka aka ga-emekwa ka evolushọn ka mma. Ihe omume a mepụtara ihe na-agbanwe agbanwe na otu anụ ahụ na-akpụ akpụ ebe ọ bụ na ha nwere ike ịmalite imeri gburugburu ụwa. Ebuputara ekele maka mmegharị nke ịghara ịlaghachi na mmiri iji dina àkwá ha.
N'oge a oke mgbanwe dị n'oké osimiri na ọtụtụ kọntinent. Ihe omume tectonic a mere ka ọtụtụ ndị kọntinent ịkwaga wee nwee nnukwu kọntinent a maara dị ka Pangea. Banyere ihu igwe, n'oge oge Carboniferous enwere ihu igwe na-ekpo ọkụ. Ọnọdụ ihu igwe a na-ekpo ọkụ ma na-ekpo mmiri mere ka ọtụtụ ahịhịa na-agbasa n'ụwa nile. O kwere ka e guzobe oke ohia na mmepe na iche iche nke ndu ndi ozo. Fọdụ ndị ọkachamara gosipụtara na ọnọdụ okpomọkụ dị gburugburu 20 degrees. Ala ndị ahụ dị mmiri mmiri nke ukwuu ma nwee ọtụtụ mmiri mmiri mmiri hiwere na mpaghara ụfọdụ.
Ifuru na ahịhịa
Banyere ahihia nke Carboniferous, enwere otutu uzo di ugbua ma obu n'ihi onodu gburugburu ebe obibi di nma. Ọnọdụ ihu igwe a na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ dị mma maka mmepe nke ahịhịa na-adịgide adịgide. Osisi ndị kacha pụta ìhè bụ ndị Pteridospermatophyta, Lepidodendrales, Cordaitales, equisetales na Lycopodiales.
A maara ìgwè nke mbụ dịka Mkpụrụ Ferns. Amara na ha bụ ezi mkpụrụ na-amị mkpụrụ na aha fern bụ n'ihi na ọ nwere ọdịdị yiri nke ndị dị ugbu a. Ha rutere ezigbo nso n'ala ma nwee mkpo ahihia nke na-ejigide mmiri.
Ndị lepidodendrales bụ otu ahịhịa na-apụ n'anya na mbido nke oge ikpeazụ. Ha ruru ogo ha kachasi n'oge Carboniferous na ha ruru mita iri atọ n’ogologo. The cordaitales bụ ụdị nke osisi na-adịkwaghị n'oge oke ikpochapu nke Oge Triassic y Jurassic. Mgbakwunye ya gosipụtara xylem nke isi na nke abụọ. Akwụkwọ ya buru ibu, na-eru otu mita n’ogologo.
Ugbu a, anyị ga-enyocha anụmanụ nke Carboniferous. N'oge a, ọtụtụ anụmanụ nọ n'ọtụtụ dị nnọọ iche. N'ihi ihu igwe na gburugburu ebe obibi dị mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nile ahụ nwere ọdịiche na mmepe. Ọnọdụ ihu igwe na ikuku na-ekpo ọkụ gbakwunyere nnukwu nnweta nke ikuku ikuku nke ikuku nyere aka na mmepe nke ọtụtụ ụdị. N'etiti ụmụ anụmanụ na Ndị kachasị ewu ewu na anụ ọhịa Carboniferous bụ amphibians, ụmụ ahụhụ na anụmanụ mmiri. Na ngwụcha nke oge a, anụ ndị mbụ na - akpụ akpụ pụtara.
Ka anyị buru ụzọ tụlee akụkụ ndị ahụ. N’oge Carboniferous enwere otutu ihe omuma di iche iche nke ogbu na nkwonkwo. Animalsmụ anụmanụ a abụwo isiokwu nke ọtụtụ ndị ọkachamara. Nnukwu anụmanụ ndị a na-eche na ọ bụ n'ihi ikuku oxygen dị elu nke ikuku.
Ọ bụ arthropod a maara dị ka nnukwu centipede. Ọ bụ arthropod a ma ama n'oge a dum. Ma nke ahụ bụ ọ ruru mita 3 n'ogologo ma bụrụ nke ìgwè myriapods. Ọ bụ anụmanụ dị mkpụmkpụ ma dịkwa ihe dị ka ọkara ọkara n’ogologo. Ihe mejuputara ya na ngalaba nke ejikọtara onwe ya ma jiri mbadamba kpuchie ya.
N'ime otu arachnids sitere na oge Carboniferous, ụdị ududo a maara dị ka Mesothelae pụtara. Ihe njiri mara ya bụ nke buru ibu, nke ruru ihe dịka isi mmadụ. Nri ha riri elu ma rie umu anumanu.
N'oge a, e nwere ụmụ ahụhụ na-efe efe nke yiri nnọọ dragonflies taa. Ha buru oke anumanu ma jiri ihe dika 70 centimeters site na njedebe rue uzo. Ha na-a ghọtara dị ka ụmụ ahụhụ kachasị ukwuu ebiela ụwa a. Nri ha na-eri anụ ma ha na-eri anụ anụmanụ ndị pere mpe dị ka amphibians na ụmụ ahụhụ.
Anụmanụ Carboniferous: amphibians
Dị ka anyị kwuru na mmalite nke isiokwu ahụ, amphibians bụ otu ìgwè anụmanụ ndị gbanwere mgbanwe kachasị na mgbanwe. Okwesiri ikwuputa mbelata nha ahu dika nkuchi nke iku ume. Ndị amphibians mbụ gosipụtara pụtara nwere nhazi ahụ dịka nke salamanders.
E nwere ụdị amphibians dị iche iche. Ihe ndị a na-eme bụ amphibians tetrapod nke nwere obere ahụ na mkpụmkpụ, aka siri ike. Crassigyrinus bụ amphibians nwere ọdịdị dịtụ ntakịrị karịa. Aka ya dị n’ihu nke ukwuu nke na ọ gaghị enwe ike ịkwado ozu anụmanụ. Ọ bụ tetrapod nke ogologo ya dị ihe dị ka mita abụọ na ịdị arọ nke ihe dịka 80 n'arọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Carboniferous.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Anụmanụ Carboniferous